Faysal Cali Waraabe Oo Banaanka Soo Dhigay Dhaliillo Badan Oo Ay Lahayd Doorashadii Madaxtooyaddu – HormoodNews
Faysal Cali Waraabe Oo Banaanka Soo Dhigay Dhaliillo Badan Oo Ay Lahayd Doorashadii Madaxtooyaddu
12/06/2017 7:18 pm by HormoodNews Views: 5
Gabiley (HMN): Guddoomiyaha xisbiga mucaairkd ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa markii u horaysay cadeeyay in ay jireen waxyaabo badan oo mad-madow ah oo hadheeyay doorashadii madaxtooyadda ee Somaliland ka qabsoontay 13-kii bishii November ee sanadkan.
Waxaanu sheegay in doorashadaasi ay ahayd mid qaab qabyaaladeed oo qaawan loogu kala codeeyay xisbiyadda siyaasadda, isla markaana ay jireen ceebo fara badan oo ay lahayd doorashadaasi.
Eng. Faysal, waxa uu tilmaamay in caqabaddo badan oo ay reebtay doorashadaasi iyo kala qayb sanaan qabaa’ilka dhexdoodda ah ay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hor yaalla madaxweynaha la doortay Muuse Biixi.
Waxaanu banaanka soo dhigay dhaliilo iyo waxyaabo kaloo ka baxsan anshaxa doorashooyinka iyo nidaamka siyaasiga ah oo ay lahayd doorashadaasi. Waxaanu yidhi “Madaxweynaha la doortay waxaa hor yalla hawlo culus. Doorashadii dhawaan dhacday waxay ahayd doorashadii u horaysay ee si qabiil ah inoo kala qaybisay”.
Faysal Cali Waraabe, waxa uu sidan ka sheegay xafladda uu shalay kaga qayb galay magaaladda Gabiley, isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Aduunka doorshooyinka xisbiyo ayaa loo kala qayb samaa, laakiin inagu reerro ayaynu u kala qaybsanay.
Qabyaaladu waa meesha aynu ugu nugul nahay haddii aynu nahay reer Somaliland, waxyaabaha ummadda dib u dhigana waxaa ka mid ah dhaqanka, cimiladda, meesha uu ku yaallo dalku.Inaga qodobka dib inoo riday, ee qayrkeen inaga reebay, waa qaybyaaladda”.
Guddoomiyaha UCID ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay ceebihii iyo fool xumooyinkii ay lahad doorashadii madaxtooyadda, kuwaasoo uu sheegay in xiligii ay hawlahaasi socdeen ay indhaha ka qarsadeen si aan dhibaato intaa ka sii weyn dalka uga dhicin.
“Doorashadii ka hadli mayno oo way dhamaatay, siday u dhacdayna ALLAAHU yaclam wa Rasuulahu. Siday u dhacday iyo siday ahayd garanmayno, laakiin waynu aqbalnay” ayuu yidhi Faysal Cali Waraabe.